Muxuu salka ku haya kulanka caawa ee MW Farmaajo iyo xildhibaanada beesha Daarood - Muqdisho Online
Home Wararka Muxuu salka ku haya kulanka caawa ee MW Farmaajo iyo xildhibaanada...
Muxuu salka ku haya kulanka caawa ee MW Farmaajo iyo xildhibaanada beesha Daarood
Waxaa caawa aqalka Madaxtooyada JFS ku kulmi doona MW Farmaajo iyo xildhibaanada beesha Daarood. Kulanka ayaa waxaa codsaday MW Farmaajo kaddib cadaadis xooggan uu kala kulmay caburinta shacabka Muqdisho kuwaasoo go’aansaday in ay iska qaadaan heeryada iyo caburinta uu ku hayo MW Farmaajo iyo RW Kheyre.
Shacabka Muqdisho ayaa maalmihi la soo dhaafay ku mudaaharaadayay kaddib markii laga xirtay waddooyinka lana xakameeyay isku socodkii dadka. Dhalinyarada ku shaqeysta mooto Bajaajta oo u adkeysan waayay dilalka joogtada ah ee ay ku hayaan ciidanka Booliska ee ka amarqaata RW Kheyre ayaa bilaabay mudaaharaadyo ay kaga cabanayaan jid gooyada lagu sameeyay si ay u soo saartaan nolol maalmeedkooda.
Waxaa sidoo kale shalay uu ku soo dhammaaday shir dhexmaray maamulka Gobolka Banaadir ee uu horjoogaha ka yahay Yariisow kaddib markii aay darawalada ku xamaasha gawaarida takaasida iyo caasiga ay ka biyo diideen in aay muujiyaan dulqaad si uu jidadka u sii xirnaadaan.
MW Farmaajo aya cabsi weyn ka qaba mudaaharaadyo la qorsheeyay in aay magaalada Muqdisho ka dhacaan maalmaha soo socdo waxaana ilo wareedyo la hadlay MOL ay u sheegeen in MW Farmaajo uu rabo in uu beer laxowsado xildhibaanada Daarood balse uuna ka heli doonin sida uu rabo ayuu yiri mid ka mid ah xildhibaanada oo MOL la hadlay. “Cid Farmaajo ku haysato Qabiil ma jirto” Waxaa lagu diidan yahay maamul xumadiisa iyo isagoo awoodiisii dastuuriga ahayd laba nin faraha u geliyay Fahad iyo Kheyre” Ayuu yiri xildhbaanka oo diiday in aan magaciisa sheegno.
Wixii ka soo baxa shirka caawa waxaan idiinkuguu soo gudbin doonaa qormooyinka danba hadduu allaha awoodda leh inoo saamaxo.
Previous articleUS: Yes, we killed Islamic State’s No.2 in Somalia
Next articleCiidanka Booliska oo toogtay Shabab ay nolol ku qabteen (Yaa Amaray)